Chii chinonzi Kushambadzira Orchestration? | Martech Zone
China, April 23, 2020 China, April 23, 2020 Douglas Karr
Zvakaoma kutenda kuti ndave nenguva yakareba ndichinyora blog rangu, asi ini ndinoda kuti ini kazhinji ndinogona kureva kune zvekare zvinyorwa kamwechete mune imwe nguva. Makumi gumi apfuura, ini ndakanyora nyowani midhiya vanachipangamazano vaive chaizvo zvakanyanya senge maconductor maconductor:
Ma conductor havafanirwe kunge vane hunyanzvi vaimbi vane chero chiridzwa. zvisinei, ivo vanonzwisisa zvizere mashandisiro echiridzwa chega chega, kuita kuti vese vashande pamwe, uye nekuita imwe mimhanzi yakanaka. Zvinosuruvarisa isu hatina kuzvidaidza isu vevatengesi!
Kurumidza kuenda mberi nhasi, uye kushambadzira orchestration rava izwi rakajairika rinoshandiswa kutsanangura mashandisiro anoita vashambadziri masystem uye nzira dzekuvaka nekuziva pamwe nekubatana nevateereri vavo. Izwi iri rinonyanya kushandiswa kana muchikurukura Akaunti Yakavakirwa Kushambadzira sezvo tarisiro yacho ichinyatso kuzivikanwa uyezve nhevedzano yezviitiko zvichipetenuka kuti vakombe tarisiro kuburikidza nerwendo rwevatengi, zvichivatungamira kukutendeuka.
Heano maitiro Engagio, account-based kushambadzira chikuva, inotsanangura kushambadzira orchestration:
Kushambadzira orchestration inzira yekushambadzira iyo isingatarise kuendesa yakamira mishandirapamwe, asi panzvimbo pekugadzirisa seti yehukama hwekuyambuka-chiteshi kudyidzana iyo, kana ikawedzerwa pamwechete, inogadzira yakasarudzika mutengi ruzivo.
Kuisa uye kugadzirisa iyo omni-chiteshi kushambadzira zano haina kuganhurirwa kune bhizinesi nyowani, unogona zvakare kusundira mameseji uye kushambadzira kwemuchinjiko-kutengesa uye kusimudzira mikana, kumutsidzira, kana kupa nzira kune vatengi kuti vave vatsigiri. Engagio inodambura mitambo yakajairwa mumapoka mashanu:
Kushambadzira Orchestration Inotamba
Chinangwa uye Engagement Inotamba - nzira huru yekuve nechokwadi chekuti uri kuwana zvakanakisa kubva pane chako chinangwa uye data rekuita, saka iro zita. Vashandise kana angangoita mutengi ari muchikamu chekutsvaga uye chekutsvaga.
Kushambadzira Akakodzera Akaundi (MQA) Inotamba - inoshandiswa kana iyo account inotarisirwa yasvika padanho rekuita zvakakwana kana kuita kwaungade kutengesa kuti uite navo
Zunza Muti Kutamba - paunenge uine tarisiro yekutaura neVatengesi, asi zvadaro zvasviba. Kuregedza izvi tarisiro zvinoreva kurega kuenda kune angangoita madhiri, saka zvakafanira kuedza kuti uite zvekare.
Yakavharwa Won Mitambo - vatengi varipo vakanakira mitambo yakanangwa yekuwedzera huwandu hwepakati mutengi wako. Zvinogona kusanganisira kuvandudzwa, kutengesa-kutengesa, upsell, uye kukurudzira vatengi.
Yakavharwa Yakarasika Mitambo - kana chibvumirano chikadonha, izvi zvinogona kukubatsira kuti udzidze zvawakatadza kuitira kuti usazodzokorodza zvikanganiso zvakafanana mune ramangwana. Ivo vanogona zvakare kushandiswa kuhwina kumashure account kubva kumukwikwidzi.
Orchestration chimwe chinhu chinogona kutyisidzira, asi hachifanirwe kunge chiri - nzira yacho ine simba kwazvo uye yakakosha mukushambadzira otomatiki uye kushambadzira-account-based kushambadzira (ABM).
ichi infographic kubva kuEngagio inotsanangura zvakasiyana siyana nenzira iri nyore yekutevera uye yekuona. Wakavhurika kuti utumire izvi? Engagio angave anofara kunyora zvimwe zvemukati kuti aperekedze futi.
Kushambadzira orchestration kunogona kuomarara. Engagio yauyawo negwara rinokuratidza maitiro ekushandisa zvikwata zvako zviripo uye masisitimu ekuti ABM ive nyore uye ibudirire. Ivo zvakare vaisanganisira 18 yakarongedzwa kushambadzira mitambo iyo inokuratidza iwe kwete chete maitiro ekushambadzira kushambadzira kwako, asiwo mashandisiro ekushandisa otomatiki kuita kuti orchestration isashande.
Dhawunirodha Orchestration uye Inotevera Chizvarwa cheMagetsi
Tags: account-based kushambadzirakushambadzira orchestrationkushambadzira orchestration playbook mabhukurwiyoorchestration inoridza
10 Bhenefiti yeVatengi Kuvimbika & Makomborero Zvirongwa